Senior Web Developer Archives - Glory Assumption Space
1. Senior Web Developer – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်မြို့နယ် ။
1. Senior Web Developer – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်မြို့နယ် ။ • BSc/MSc in Computer Science or relevant field • Age must between 25 and 30 •3years experienced in related field • Web development, cpanel, php & mysql (other requirement) • Expertise in at least one programming language, Java Script, PHP & Mysql • Solid knowledge of HTML/CSS • Experience with mockup and UI prototyping tools • Understanding of security practices • Familiarity with network diagnostics tools • Team management skills • အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00 PM ) • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • လှိုင်မြို့နယ်ရှိ IT Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ Job Description … ~ Identify user and system requirements for new websites and applications. ~ Prioritize software development projects, set timeline and assign tasks to team member ~ Create wireframes to decide on layout ~ Write or review code for various applications ~ Run functionality testing and debug code ~ Oversee junior web developers and evaluate their performance ~ Liaise with designers to decide on UI/UX elements (Like graphics and navigation buttons) ~ Ensure our software documentation is up to date ~ Collaborate with mobile developers to build mobile-responsive websites GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ IT Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )